Dowlada Soomaaliya oo wacyigelin ka sameyneysa musuqa baahay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowlada Soomaaliya oo wacyigelin ka sameyneysa musuqa baahay
A warsame 25 September 2014 26 September 2014
Mogadishu, 25 September 2014 – Wasiirka Warfaafinta, Mustafa Sheekh Cali Duhulow, ayaa maanta ku dhawaaqay barnaamijka Wacyigelinta La Dagaalanka Musuqmaasuqa Soomaaliya. Wasiirka ayaa ugu horreyntii yiri “Musuqmaasuqa waa noocyo badan yahay waxaana ka mid ah Laaluush, dhaqaalaha dalka oo la lunsado, shaqada oo la siiyo saaxiibada iyo qaraabada, sharciga oo la is hortaago, iyo kuwa fara badan oo afartan ay ka mid yihiin. Musuqmaasuqa waa waxa dalka dib u dhigaaya waana inaan si deg-deg ah u joojinaa. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go’an in la dhameystiro sharciyada loo baahan yahay iyo inaan sameyno wax kasta oo looga hortagaayo. Hase yeeshee, musuqmaasuqa waxaa si dhab ah u joojin kara shacabka Soomaaliyeed.”
Wasiirka ayaa ku dhawaaqay inuu isagu hoggaamin doono wacyigelinta la dagaalanka Musuqmaasuqa, oo uu ku sheegey in ay tahay arrin uu si shaqsi ah u daneynayo in waddanka laga joojiyo. Wacyigelinta waxaa ka mid noqon doona barnaamijyo taxane ah oo laga sii deyn doono Talefishinada, Radiyoyaasha, internetka, bogoga wargudbinta (Social Media) iyo wargeysyada, waxaana barnaamijyadaas ka mid noqon doona macluumaad la siinayo dadka oo ku aadan waxa ay sameynayaan marka ay la kulmaan falal musuqmaasuq ah, sidoo kale waxaa la sii deyn doonaa doodo, wadahadal, barnaamijyo gaar ah, barnaamijyo dadka laga qeybgalinayo dooda oo ay soo waci karaan, kulamo guud, iyo barnaamijyo kale oo kuligood looga dan leeyahay in shacabka laga wacyigeliyo khatarta musuqmaasuqa iyo in shacabka ay ka qeybqaataan joojinta musuqmaasuqa.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inay jiri doonaan barnaamijyo waxbarasho oo dadka iyo ardeyda lagu barayo khatarta musuqmaasuqa iyo sida uu uga soo horjeedo maamul wanaaga iyo horumarka dalka. Wasiirka ayaa yiri “Waa inaan hubinnaa in carruurteeena oo ah mustaqbalka berri iyo shacabka hadda joogaba inay si fiican u ogyihiin waxa uu yahay cudurka musuqmaasuqa iyo dhibaatooyinka uu bulshada u horseedo si ay noogu sahlanaato inaan u cirib tirno, oo shacabka ay si fiican u ogaadaan waxa uu sharciga ka qabo, sida loo soo sheego falalka musuqmaasuqa ah iyo danbiyada ay muteysan karaan dadka ku kaca falal musuqmaasuq ah.”
Wasiirka Warfaafinta ayaa sheegey in Dowladdu ay sameysay horumar ballaaran oo horumarisay maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka dowladda dhexdeeda, oo ay ka mid yihiin Maamulka & Maareynta Maaliyadda, oo ay jiraan Xisaabiye Guud iyo Hanti Dhowr Guud oo ay weliba u sii dheer tahay Guddiga Maamul Wanaaga Maaliyadda oo dhammaantood hubiya in dakhilga Dowladda ay u baxaan sidii loo qorsheeyey. Waxaa kaloo jira Xeer Illaaliyaha Guud ee Dalka oo isna il gaar ah ku eegaya falalka musuqmaasuqa ee dhammaan gobolada dalka oo dhan si sharciga loola tiigsado cid walba oo lagu helo falalka musuqmaasuqa.
Wasiirka Warfaafinta ayaa hadalkiisa ku soo gabogabeeyey “Dowladda Federaalka Soomaaliya waa ay ka go’an tahay la dagaalanka Musuqmaasuqa oo waxii maanta ka danbeeya waxaan kordhineynaa inaan sida ugu adag ula dagaalanno. Soomaalida waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin dad ganacsiga ku sareeya oo ay ka ammaanan yihiin Adduunka oo dhan. Hase yeeshee, Waddanka Soomaaliya waxuu adduunku ku qiimeeyaa inaan nahay waddanka ugu musuqmaasuq badan oo aan Afghansitan, North Korea iyo Iraq aan liiska dhanka hoose uga jirno. Arrintan ayaa sumcada, karaamada iyo sharafteena meel weyn uga dhaceysa, oo arrimahan qaarkood ay la xiriirto sida uu Adduunka maanta u horumaray iyo meesha aan joogno iyo mararka qaar oo arrimahan ay yihiin kuwo muddo soo jirey oo lala qabsaday. Hase yeeshee waa inaan caalamka la qabsanaa oo aan dhanka wanaagsan meel wanaagsan aan ka galnaa. Haddaba si aan sumcadeena, karaamadeena iyo sharafkeena u soo ceshano waa inaan kordhinaa la dagaalanka falalka musuqmaasuqa ah ee dib noo dhigay. Si waddankeennu u noqdo mid horumara oo kheyraadka fara badan ee EEBBE na siiyey aan uga faa’iideysano waa inaan si adag ula dagaalnaa Musuqmaasuqa.”
Gaalkacyo: Burcad Badeeda oo isku dilay lacagtii ay ka qaateen wariye ajnabi ah
Xog: Muungaab oo kursiga laga tuurayo & xilalka uu hayey oo la kala qaadayo